Dr. C/raxmaan Baadiyoow “Nidaam qabiil in 20 sano lagu soo celceliyo waa wax laga wanaagsan yahay arrintaas, doorasho.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Dr. C/raxmaan Baadiyoow “Nidaam qabiil in 20 sano lagu soo celceliyo waa...
Dr. C/raxmaan Baadiyoow “Nidaam qabiil in 20 sano lagu soo celceliyo waa wax laga wanaagsan yahay arrintaas, doorasho..
Nairobi [Dayniile online] Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliyeed aysan wali gaarin halkii looga baahnaa 30- sano kaddib, hadii ay wali taagan tahay nidaam qabiil oo aysan wali u diyaarsanayn gaarista doorasho qof iyo cod ah.
Waxa uu sheegay Baadiyow inuu kobcay caqliga dadka Somaaliyeed ee ganacsiga, isku-tashiga, iskaashiga iyo adkeysiga, waxaana xiligan loo baahnaa doorasho qof iyo cod ah in ay dalka ka dhacdo.
“Waxaa kale oo muuqata in caqliga Somaaliyeed uusan kobcin marka la dhisaayo dowlad. Tusaale waxaa ka ah in 20 sano lagu celceliyay nidaam beeleed iyo xulitaan aan shaqayneyn. Waxaa gabi-ahaanba meesha ka maqan xaqii muwaadinnimo iyo u sinaanshaha xuquuqda iyo waajibaadka” ayuu mar kale yiri baadiyow.
“ Waxaa sidoo kale maqan u hogaansamidda qaanuunka! Dhanka kale, waxaa maqan in muwaadiniintu doortaan wakiilladooda iyo madaxdooda si xor ah oo xalaal ah. Muwaadinnimo, sareynta sharciga iyo doorasho dadweyne ayaa ah waddada dowladnimada. Nasiib daro, caqliga iyo dhaqanka siyaasiyiinta Somaaliyeed wax badan iskama bedelin laga soo bilaabo 1956. Dhaqankaas wuxuu soo dumiyay dowladdii dhexe 1991” ayuu mar kale yiri aqoonyahan baadiyow. Sidoo kale Dr Cabduraxmaan Cabdulaahi Macalin Baadiyow ayaa ah La-Taliyaha sare R/wasaaraha ee Arrimaha Nabadeynta iyo Dib u heshiisiinta, waxa uuna ka mid yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ee sida aadka ah ugu ololeynaya in dalka ay ka dhacaan doorasho qof iyo cod ah, wallow gudiga doorashada ay gudoomiyaha u tahay xaliimo yarey aysan wali shaacin arintaas. Waxaana dhiman in arintaas ay ka doodaan baarlamaanka somaliya. Dr Cabduraxmaan Cabdulaahi Macalin Baadiyow ayaa guulo la taaban kara ka soo hoyay arinta Galmudug, waxa uu ahaa Gudoomiyaha Guddiga qaban qaabada shirka dib u heshiinta beelaha Galmudug.
Cabdixakiin Cilmi Xassan